Tsy misy fiantohana ara-pahasalamana (loharano 2020) | SingleCare - Orinasa | Desambra 2021
Orinasa, Fanabeazana Ara-Pahasalamana Orinasa Zava-Mahadomelina Vs. Namana Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina, Fanabeazana Ara-Pahasalamana Wellness Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Fahasalamana Fanatanjahan-Tena Mavesatra Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina, Vaovao Pets Vaovao, Wellness Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Biby Fiompy Fiaraha-Monina, Fahasalamana Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina Orinasa, The Checkout Fialam-Boly
Tena >> Orinasa >> Tsy misy fiantohana ara-pahasalamana? Andramo ireto loharano 2020 ireto
Tsy misy fiantohana ara-pahasalamana? Andramo ireto loharano 2020 ireto
Tamin'ny taona 2018, 9% ny Amerikanina dia tsy nisy fiantohana. Roa taona sy areti-mandringana taty aoriana, fitakiana tsy an'asa an-tapitrisany no tototry ny latabatry ny Departemantan'ny asa. Satria efa ho ny antsasaky ny Amerikanina no nanana drafitra ara-pahasalamana tohanan'ny mpampiasa, azontsika atao ny manantena ny hitombo ny isan'ny marary tsy misy antoka.
Na dia mbola misy aza ny fanjakana sasany mampihatra izany, tsy misy intsony ny sazy famonjen'ny governemanta federaly noho ny tsy fananany fiantohana ara-pahasalamana. Saingy ny loza ateraky ny fiantohana ara-pahasalamana dia lehibe lavitra noho ny olana ara-bola. Mampidi-doza ny fahasalamanao koa izany. Amin'ny taona 2019, Fianakaviana 1 amin'ny 3 tany Etazonia dia nihataka tamin'ny fitsaboana noho ny vidiny. Ilaina ny fitsaboana sy ny fifikirana amin'ny fanafody amin'ny fitsaboana aretina alohan'ny hahatongavany amin'ny aretina mitaiza, dia ny antony lehibe mahatonga ny fahafatesana sy fahasembanana any Etazonia
Ka inona no ataonao raha tsy manana fiantohana ara-pahasalamana ianao? Voalohany, tokony handinika ianao Safidy fandrakofana fahasalamana vetivety sy programa manana fidiram-bola ambany toa ny Medicaid na ny programa momba ny fiantohana ara-pahasalamana ho an'ny ankizy (CHIP). Na izany aza, mbola azo atao ny mahazo fitsaboana sy fanafody amin'ny fihenam-bidy raha tsy misy fiantohana ara-pahasalamana. Ireto ny loharanom-pahalalana hahazoana ny fanampiana ilainao.
Mifandraika: Inona no hatao rehefa very fiantohana ara-pahasalamana ianao
Fandraisana fitsaboana tsy misy fiantohana
Soa ihany, ny tsy fananana fiantohana ara-pahasalamana dia tsy midika hoe tsy mahazo fitsaboana ara-pahasalamana ianao. Eo ambanin'ny Fitsaboana ara-pitsaboana vonjy maika sy ny lalàna miasa mafy , saika ny hopitaly rehetra dia tsy maintsy manome fikarakarana ireo marary mila fitsaboana maika na inona na inona fiantohana fiantohany. Fa ahoana raha tsy vonjy maika? Ny tobim-pitsaboana maika sy ny toeram-pitsaboana maika dia manan-jo hampihena ny marary amin'ny serivisy vonjy maika raha tsy zakan'izy ireo izany. Na izany aza, zava-dehibe indrindra ny fanaovana laharam-pahamehana ny fahasalamanao amin'ny kitapom-bolanao. Misy fomba maro hahitana tobim-pahasalamana ambany na maimaim-poana ary ahazoana vaksiny sy fanafody omena fihenam-bidy (na maimaim-poana aza)
Ahoana no fomba hahitanao dokotera tsy misy fiantohana
Fikarakarana maika vs. efitrano fitsaboana vonjy maika
Ahoana ny fomba ahazoana fitifirana gripa fihenam-bidy na maimaim-poana
Inona ny vaksiny azoko omena fihenam-bidy?
Ny saram-pitsaboana (sy ny fomba hitsitsiana raha tsy misy fiantohana)
Miaraka na tsy misy fiantohana ara-pahasalamana, ny fikarakarana ara-pahasalamana dia misy fiantraikany amin'ny snowball lafo. Ny fitsidihana voalohany miaraka amin'ny mpitsabo iray dia mety mitentina $ 70- $ 250. Avy eo, manana fitsapana fitiliana diagnostika ianao izay afaka manomboka amin'ny $ 15 ho an'ny fitsapana ra hatramin'ny $ 480 ho an'ny fitarafana. Raha maratra na marary antonony ianao, dia mety manatona tobim-pitsaboana maika. Handany $ 100- $ 200 ny marary tsy misy fiantohana. Ny fitsidihana ao amin'ny efitrano fitsaboana vonjy maika dia mety miteraka faktiora $ 3 000 na mahery amin'ny hopitaly.
Ireo vidiny ireo dia tsy tokony hampatahotra olona tsy mitady fikarakarana. Misy fomba hahazoana vola, fihenam-bidy, na serivisy fitsaboana maimaimpoana. Mila mahafantatra fotsiny ireo safidy azonao atao ianao. Ampiasao ny loharanom-pahalalana etsy ambany mba hahazoana fanampiana amin'ny vidin'ny fahasalamana.
Antontan'isa momba ny trosa ara-pitsaboana
Manampy amin'ny faktiora amin'ny fitsaboana
Ny vola lany amin'ny fahasalamana dia azonao atao ny mangataka amin'ny fandoavan-ketrao
Fomba ahazoana famatsiana diabeta maimaimpoana
Fantatrao ve, mety ho mora vidy kokoa ny anao raha tsy misy fiantohana ? Efa ho ny ampahefatry ( 2. 3% ) ny preskripsi dia lafo kokoa amin'ny fiantohana noho ny tsy fisian'izany. Ho fanampin'izany, misy fomba maro ahazoana vidiny ambany kokoa aza raha tsy misy fiantohana, ao anatin'izany ny programa fitehirizana farmasia, tapakilan'ny mpanamboatra ary karatra fihenam-bidy. Tetezo ireto torolàlana manaraka ireto hahitanao fomba vaovao hitsaboana fanafody - tsy ilaina ny fiantohana.
Ahoana no ahafahako mitsitsy amin'ny fanafody?
Azoko atao ve ny mampiasa karatra fitehirizana dokotera ho an'ny fanafody tsy lafo?
Ahoana ny fomba hifehezana zaza tsy misy fiantohana
Ahoana ny fomba hitsitsiana ny preskripsi Walgreens
Ahoana ny fomba hitsitsiana ny preskripsi Walmart
Mitady drafitra fiantohana ara-pahasalamana mora vidy
Na dia misy aza ny fomba fitehirizana raha tsy misy fiantohana dia mety ho mora kokoa ny fahazoana miditra fitsaboana amin'ny fandrakofana. Medicaid sy CHIP no drafitra fahasalamana mora vidy indrindra ao amin'ny banky federaly amerikanina sy ny fanjakana. Miorina amin'ny fidiram-bola ny Medicaid. Ny tahan'ny fidiram-bola hahazoana medicaid dia miovaova arakaraka ny fanjakana amin'ny fanjakana. Raha avo loatra ny vola miditrao amin'ny Medicaid dia mbola azonao atao ny manarona CHIP anao. Ny vehivavy bevohoka koa dia mety hosaronan'ny CHIP any amin'ny fanjakana sasany. Tadidio ihany koa fa na dia toa avo lenta amin'ny drafitra eny an-tsena aza ny premiums na ny deductibles, dia mbola afaka manangona vola any aoriana any ianao raha mampitaha ny copay amin'ny serivisy ara-pahasalamana nefa tsy misy fiantohana.
Mifandraika: Ahoana no hahazoana fiantohana ara-pahasalamana
Ireto misy loharanom-pahalalana fanampiny hanaraha-maso haingana ny fitsaboana ara-pahasalamana:
Mitadiava tobim-pahasalamana maimaimpoana
Fanampiana ara-bola an'ny Samaritan Health Services '
Fangatahana fanampiana ho an'ny UnitedHealthcare Children's Foundation
Fampiharana HealthWell Foundation
Mizaha ny tsenan'ny fiantohana ara-pahasalamana ao amin'ny healthcare.gov
Top 5 tsara indrindra ho an'ny mpitsabo mpanampy
Amin'ity fetin'ny ray ity dia ampirisiho ny rainao hankany amin'ny dokotera
inona no ataon'ny plan b hampitsaharana ny fitondrana vohoka
vidim-bola maimaimpoana maimaimpoana maimaimpoana amin'ny rafitra fanaraha-maso glucose
afaka misotro toaka ve ianao rehefa misotro alikaola
maninona no ratsy loatra ny sira aminao?
ny voka-dratsin'ny fihinanana benadryl isan'andro
inona ny mahasamihafa ny vicodin sy ny norco